ညစာ အတူတူစားရအော င်လို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ အကြ မ်းစား ဗီဒီယို – Shwe Myanmar
မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ
အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာထက် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား
ဖက်ရှင်လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားလေးပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စားပိုစ့်လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ Hello Guys!!! မွေစံ ရဲ့ video အမိုက်စားကို အမြည်းတင်ပေးလိုက်တယ် ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်းယားစရာပုံစံလေးနဲ့
လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သူမကတော့ Hello Guys!!! မှစေံ ရဲ့ video အမိုကျစားကို အမွညျးတငျပေးလိုကျတယျ ဆိုပွီး အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အသညျးယားစရာပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှဟော ပရိသတျတှကေို အခဈြတှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျလျနနျးမှစေံရဲ့ အမိုကျစားပုံစံလေးနဲ့ ကွှလေောကျ စရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Previous PostPrevious အိပ်နေရင်းနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကအဆီတွေကို ချေဖျက်ပေးမယ့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း .
Next PostNext မိမို က်ဂေါ်လွန်းနေတဲ့ ဘီ က နီလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လန်းနေအောင်ကပြလို က်တဲ့ M SENG LU ဗီဒီယိုဖိုင်